Laftagareen oo ku dhawaad 10 Saxafi ku xiray Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Laftagareen oo ku dhawaad 10 Saxafi ku xiray Baydhabo
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur galbeed, Cabdicasiis Lafta-gareen, ayaa amray in xabsiga la dhigo ku dhawaad 10 wariye oo ka hol-gala Baydhabo, kadib markii Shariif Xasan Sheekh Aadan, uu maanta dib ugu laabtay degaannada maamulka.
BAYDHABO, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya Gobolka Bay, ayaa sheegaya in ay caawa xabsiga ku hoyanayaan ku dhawaad 10 saxafi oo ka howlgala xarunta ku meel gaarka ah ee Maamulka Koofur Galbeed Baydhabo, kadib markii booliska iyo Nabad-sugiddu ay siyaabo kala duwan u xireen wariyeyaasha.
Sida uu Keydmedia Online u sheegay wariye madax-bannaan, oo ku sugan magaalo madaxda Bay, lix wariye ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka qaar kale laga qabtay xarumaha warbaahin ee ay ka howl-galaan.
Xarigga Suxufiyiintaan, ayaa loo aaneeyay kadib markii warbaahintu ka dhaga adeegtay baahinta socdaalka Madaxweynhii hore ee KGS, Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaas oo muddo dheer kadib maanta dib ugu laabtay Baydhabo.
Madaxweynaha Maamulkaas, Cabdicasiis Laftagareen, ayaa la sheegay inuu amray xarigga wariyeyaasha, waxaana taas loo sababeynayaa khilaaf siyaasadeed oo kala dhaxeeya Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka DFS, Shariif Xasan.
KON, waxa ay hore u heshay xogo hoose oo sheegaya in guud ahaan magaalaada laga mamnuucay in ay tagaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan Laftagareen, isla-markaana mucaaradka ku ah Farmaajo, waxaana qeyb ka mid ah lala wadaagay hanjabaadyo ka yimid hoggaankii hore ee hay’adda NISA.
Sidoo kale, KON, waxa ay heshay caddeymo muujinaya in garoonka diyaaradaha Baydhabo, laga hir-galiyay xabsi, lagu ciqaabo shaqsiyaadka sida togan u muujiya qaladaadka nimaadka Lafta-gareen, oo hoggaanka maamulkaas kula wareegay doorasho xiran, boob ah, dhiig ku daatay, oo ay garwadeyn ka ahyd Villa Soomaaliya oo garab ka heleysa ciidamada Itoobiya ee ku sugan Bay.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka ugu halista badan ee lagu tunto xuquuqda Suxufiyiinta, iyadoo dowladda Farmaajo iyo Maamul Goboleedyada lagu eedeeyay inay geysteen xad-gudub ka dhan ah bini'aadanimada iyo xuquuqda warbaahinta